Iikholeji zeVermont: I-SAT kunye noMTHETHO I-Scores yo kwamkelwa
Ukuqhathaniswa kobucala-ngecala lweeKholeji zeeKholeji zeeKholeji zeeKholeji zeVermont
Ukuba ucinga ngokuya kwikolishi eVermont, iitheyibhile engezantsi inokukunceda ekukhokheni isikolo esilungele iimpawu zakho. Uya kubona ukuba imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe ivela kwi-Middlebury ekhethileyo (enye yeekholeji ezikhethileyo kwilizwe) kwizikolo ezamkela phantse bonke abafake izicelo. Uya kubona kwakhona malunga nesiqingatha sekholeji yaseVermont ukuba uvavanyo-ukhetho olukhethiweyo .
Kwezinye zezikolo-zokuzikhethela unokwenza ukuba uhambise i-SAT okanye i-ACT amanqaku okubekwa okanye ukubhalwa kweengxowa-mali, kodwa amanqaku akho ayasetyenziselwa izigqibo ezivunyelwe ngaphandle kokuba ukhetha ukuba iikholeji iyaziqwalasela.
IiKholeji zeVermont izikolo ze-SAT (phakathi kwe-50%)
College of Bennington ukuvavanywa kwamathuba okuvota
EKorleton State College 430 528 430 540 - -
IKholeji yaseChamplain 520 630 500 610 - -
Green Mountain College ukuvavanywa kwamathuba okuvota
Johnson State College 403 548 380 510 - -
College yaseLyndon 410 540 430 520 - -
KwiKholeji yaseMarlboro ukuvavanywa kwamathuba okuvota
KwiKholeji yaseMidbury 630 740 650 755 - -
IYunivesithi yaseNorwich ukuvavanywa kwamathuba okuvota
ISiel Michael's College ukuvavanywa kwamathuba okuvota
KwiKholeji yobuGcisa beVermont ukuvavanywa kwamathuba okuvota
Nangona i-SAT ingumzekelo ogqithiseleyo kakhulu eNew England kuneMTHETHO, ungangenisa amanqaku kuwo onke amava xa usebenzisa (okanye ungenisa amanqaku kuwo onke amabini).
Akukho nzuzo ekusebenziseni i-SAT ukuba wenza ngcono kwi-ACT. Ngezantsi kwedatha ye-ACT:
IMITHETHO YEKholeji yeVermont I-Scores (phakathi kwe-50%)
EKorleton State College 17 24 15 22 18 23
IKholeji yaseChamplain 22 28 22 28 22 27
Johnson State College 15 23 13 23 15 19
College yaseLyndon 15 23 13 23 15 24
KwiKholeji yaseMidbury 30 33 - - - -
KwiYunivesithi yaseVermont 25 30 24 31 24 28
Amacatshulwa angasentla macala abonisa amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile. Ukuba amanqaku akho awela ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujoliswe ekujoliswe kuyo kwenye yeekholeji zeVermont. Qhubeka ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisweyo bane-SAT okanye i-ACT amanqaku angaphantsi kwezo zidweliswe, ukwenzela ukuba inani elincinci aliyilo lokunqunyulwa ngokwenene. Kwakhona khumbula ukuba amanqaku okuhlolwa okulinganayo ayingxenye enye yesicelo. Amagosa avumelekileyo kwiiikholeji ezininzi zaseVermont, ngokukodwa kwiikholeji eziphezulu zeVermont , ziya kufuna kwakhona irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadana ezilungileyo zokucebisa .
Kwiikholeji zokuzivocavoca, iirekodi zakho zemfundo ziza kubaluleke kakhulu. Iikholeji ziya kufuna ukubona ukuba uphumelele kwiiklasi zokulungiselela iikholeji. UkuPhakanyiswa okuPhambili (AP), i-Baccalaureate yamazwe ngamazwe (IB), iiNtlonelo, kunye neeklasi zokubhalisa zombini zinokudlala indima ebalulekileyo ekuboniseni ukulungelelaniswa kwekholejini.
Ukuba ufuna ukubona i-SAT kunye ne-ACT idatha yelizwe elisondeleyo, khangela amanqaku eNew York , eNew Hampshire naseMassachusetts . I-Northeast yonke ine-richortort yeekholeji neeyunivesithi ukufanisa nawaphi na amandla omfundi kunye neminqweno.
Ukwahlukana Phakathi kwee-SAT kunye neMviwo ze-ACT
Iindlela ezili-10 zokuchonga inambuzane
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseWagram
Iifayile eziMnandi kakhulu zeDoler Doll
Ziziphi ii-Ag-Gag Imithetho kwaye Kutheni Ziyingozi?
Iziphumo kunye neengcebiso: Isikhokelo sokuSebenza